Ny fitsaboana Pringles vaovao dia tonga amin'ny kapoaka manjelanjelatra amin'ny maizina ho an'ny Halloween - Potatoes News
Ny fitsaboana Pringles vaovao dia tonga amin'ny kapoaka manjelanjelatra amin'ny maizina ho an'ny Halloween
Halloween dia hitondra zavatra tsy ampoizina vitsivitsy amin'ity taona ity, ny iray amin'izany dia ny Pringles "Sour Scream & Tongolo"Sy" Oooriginal ", feno fonosana manjelanjelatra ao anaty haizina.
Pringles "Sour Scream & Onion" ary "Oooriginal" Glow-in-the-Dark cans dia manome ny mpanao snackers ny sira masira tonga lafatra mandritra ny vanim-potoana mamy be dia be ary avo roa heny ho ivon-toerana mampihoron-koditra indrindra amin'ny fety amin'ny Halloween.
Na mitady sakafo maivana aorian'ny fianarana any an-tsekoly ny mpanjifa, manamboatra manaikitra manaikitra sasany, na milahatra amin'ny sisin-dàlan'izy ireo ho an'ny isa farany fitifirana, na kalitaon'ny Pringles Glow-in-the-Dark dia mamirapiratra kely - sy fahazavana - amin'ny fankalazana ny fianakavian'izy ireo mandritra ny vanim-potoana rehetra.
"Faly izahay manome ny tsiro mahazatra an'ny Pringles, mamaky tsimoka amin'ny vanim-potoana mahafinaritra ary mitondra faharanitan-javatra tsy ilaina amin'ny Halloween miaraka amin'ny kapoaka vaovao Glow-in-the-Dark," hoy i Gareth Maguire, talen'ny varotra Pringles. "Ity fakana mahavariana ity amin'ny tsiro sy ny tongolobe ary ny tsiro Original no tena tianay, dia fomba tsara iray hanomezana ireo mpankafy zavatra hafaliana amin'ity vanim-potoana Halloween ity."
Ireo kapoaka voafantina voafantina Pringles "Sour Scream & Onion" sy "Oooriginal" Glow-in-the-Dark dia ho hita manerana an'i Etazonia manomboka amin'ny volana septambra.
Hafanana, fihenan'ny haintany Mena voly ovy ao amin'ny Renirano Mena, ka miteraka kalitao, fihenan'ny vokatra ny tahiry latabatra
Ny Skagit Valley Natives dia namorona fanamboarana teknolojia avo lenta ho an'ny olan'ny fanondrahana tantsaha
Ny toeram-piompiana PEI dia lasa laboratoara velona ho an'ny mpahay siansa, vondron-drano ary tantsaha